Nato oo ku eedeysay Qadaafi in uu gabaad ka dhiganayo Masaajidda & goobaha caruurtu.. – SBC
Nato oo ku eedeysay Qadaafi in uu gabaad ka dhiganayo Masaajidda & goobaha caruurtu..
Isbahaysiga Nato ayaa ka hadlay eedeymaha loogu soo jeedinayo in ay duqeeyaan goobo ay dad rayid ah ku sugan yihiin,waxaana Nato ay taasi ku tilmaantay dacaayad ay dhoodhoobayaan Nidaamka Korneel Qadaafi.
Afhayeen u hadashay Nato oo lagu magacaabo Oana Ongesco ayaa sheegtay in ay tahay been abuur wararka sheegaya in ay ciidamada Nato beegsanayaan goobo ay dad rayid ah ku sugan yihiin,waxaana taa badalkeeda ay ku eedeysay Korneel Qadaafi in isaga iyo masuuliyiinta kale ee dowladiisa ay gabaad ka dhiganayaan Masaajidada iyo goobaha lagu xanaaneeyo caruurta.
Oana Ongesco waxaa ay qirtay in ay burburiyeen maalin ka hor gadiid dagaal oo ay lahaayeen kooxaha kacdoonka,iyadoona sida ay sheegtay ay ku khaldeen Ciidamada daacada u ah Madaxweynaha Liibiya Mucamar Al qadaafi.
Hadalka Oana Ongesco ayaa jawaab u ah,hadal maalin kahor uu raysal wasaaraha Liibiya Al baqdadi Maxmudi uu ku weeraray isbahaysiga Nato in ay masuul ka yihiin rayid badan oo ku dhimanaya dalkiisa,iyadoona sida uu xusay duqaymaha ay diyaaradaha isbahaysiugu ay gaysanayaan ay ku dhinteen dad badan oo rayid ah.
Dhinaca kale weeraradii ugu dambeeyay ee ay NATO ku qaado Triboli,waxaa ku dhintay inta haatan la ogyahay ilaa 2 qof,waxaana weli ku hoobanaya xarunta dalkaasi Liibiya madaafiicda ka imaanaya diyaaradaha iyo weliba maraakiibta dagaalka Nato.